News: चियाबारीमै पुगेर किसानलाई चिया काट्ने सीप सिकाइँदै
चियाबारीमै पुगेर किसानलाई चिया काट्ने सीप सिकाइँदै
shudeshna.smartkrishi@admin.com रासस 2022-01-17 117
मङ्गलबारे। चिया उत्पादनको सरल तथा आधुनिक प्रविधि सिकाई व्यावसायिक उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले इलामका किसानलाई चिया काट्ने सीप सिकाइँदै छ ।
गाउँमा नै सामान्य ज्ञान र सीप लिएर पाँखाबारीमा चियालगाएका किसानलाई चिया तथा कफी विकास बोर्डका प्राविधिकले उनीहरुको खेतबारीमै पुगेर चिया काट्ने तरिकाबारे प्राविधिक सीप सिकाउन लागेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रमअनुसार चिया किसानलाई व्यावसायिक बनाउने लक्ष्यसहित ‘असल कृषि अभ्यासअन्तर्गत चिया काट्ने प्राविधिक सीप’ सिकाउन थालिएको बोर्डले जनाएको छ । दक्षप्राविधिकसहितको टोलीले किसानको खेतबारीमै पुगेर चिया काट्ने सीप सिकाउन थालिएको बोर्डको भनाइ छ ।
बोर्डका अनुसार चियाको राजधानीका रुपमा परिचित इलामका किसानलाई चियाको गुणस्तर र उत्पादन वृद्धिका लागि यो कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ । हाल चियाको उत्पादन बन्द छ । जाडो महिना सुरु भएसँगै चियाको उत्पादन बन्द हुन्छ । तर यही सिजनमा चियालाई छाँटकाँट गर्नुपर्दछ । चिया छाँटकाँट नमिलाउँदा उत्पादन र गुणस्तर दुबै राम्रो नहुने भएकाले बोर्डले यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
जाडो महिना सुरुभएसँगै चिया कटिङ सिजन सुरु भएको छ । यही अवसरमा बोर्डले जिल्लाका चिया किसानलाई चिया काट्ने तालिम दिएको हो । चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक विष्णुप्रसाद भट्टराईले कागजी प्रक्रियामा काम देखाएर चियाको विकास नहुने भन्दै प्रयोगात्मक रुपबाटै अघि बढ्न तालिम आवश्यक रहेको बताए । उनले यस किसानको चियाको बोटसम्म नै पुगेर तालिम दिन सुरु गरिएको जानकारी दिए । “यसअघि पनि चियाका लागि धेरै कार्यक्रम भएका छन्”, उनले भने, “उद्योग लक्षित कार्यक्रम भएका कारण चिया किसानले केही जानकारी नपाएको गुनासो बढेपछि अब किसान लक्षित कार्यक्रम चरणबद्ध रुपमा सञ्चालन गरिनेछ ।”
किसानलाई छाँटकाँट गराउन गएको पुस महिनामा चिया काट्ने तालिम दिइएको छ । यो कार्यक्रम किसानसँग प्रत्यक्ष सञ्चालन हुने भएकाले फलदायी भएको उनको भनाइ छ । किसानलेसमेत यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउन आफूहरु खटेको बताउँछन् । किसान शिवलाल प्रधानले यस खालको सीपले आफूहरुलाई हौसलासमेत थपिएको बताए ।
“चियाका विभिन्न चरण हुन्छन् । चिया टिपाई मात्र नभएर छाँटकाँट, गोडमेल तथा मलपानी नमिल्दा उत्पादनमा कमी आउने गर्छ”, उनले भने, “यस पटक बोर्डले तालिका नै बनाएर सिजन अनुसारको तालिम दिने लक्ष्य राखेकोमा आफूहरु खुसी भएको छु ।” यस कार्यक्रमले किसानलाई व्यावसायिक बनाउन, चियाको गुणस्तर कायम राख्न र बजार व्यवस्थापनमा ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक भट्टराई भने, “यो समय चिया कटिङको समय भएकाले चिया काट्न सिकाएका हौँ ।” किसानले चिया कसरी काट्ने भन्ने पनि अहिलेसम्म थाहा नहुँदा चियाको गुणस्तरमा समस्या आएको उनले बताए । त्यसैले पनि पहिलो चरणमा किसानलाई चिया कटिङ तालिमको आवश्यकता परेको उहाँको भनाइ छ । सो तालिमका लागि जिल्लाका दुई हजार ७०० किसान छनोटमा परेका छन् ।
पुस महिनामा जिल्लाका १२ स्थानमा १५ देखि ३० जनाको समूह बनाएर यस सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिएको बोर्डले जनाएको छ । प्रमाणपत्रको आधारमा नभई कटिङका बेला कैँची चलाउन जान्ने किसानलाई तालिमका लागि छनोट गरिएको बताइएको छ । कैँची नै चलाउन नजान्नेले चिया काट्ने भन्दा बिगार्ने बढी भएकाले त्यस्ता किसान छनोट नगरेको बोर्डले जनाएको छ । तालिमका लागि किसान छनोट गर्दा उद्योगसँग आवद्ध किसानको सूचीका आधारमा छनोट गरिएको छ ।
चियालाई दीर्घकालीन विकास र बजारीकरणका लागि चियाको गुणस्तर नभए समस्या हुने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको चिया उत्कृष्ट बनाउन पनि सुधार आवश्यक रहेको बोर्डको ठम्याई छ । यसका साथै चियालाई दीर्घकालीन रुपमा गुणस्तरीय बनाउनका लागि केही नीति नियमको पनि आवश्यकता रहेको हुँदा यसका लागि पनि बोर्डले प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको कार्यकारी निर्देशक भट्टराईको भनाइ छ । किसानको सहयोग र समर्थन भएमा बोर्डबाट नै चियाको समर्थन मूल्य तोक्न सक्ने उनले बताए ।
पछिल्लो समय चियाको बजार बिस्तारका लागि छिमेकी मुलुक चीन सकारात्मक रहेको बताउँदै कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले यस बारे अन्य मुलुकसँग पनि छलफल र सकारात्मक पहल भइरहेको जानकारी दिए । यसका लागि सबैभन्दा पहिले नेपालको चिया गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक छ, उनले भने । विभिन्न किसिमका तालिम आयोजना गरी किसानलाई दक्ष र प्रविधिमैत्री बनाउनु अहिले प्रथम आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।
चियाको राजधानी घोषणा गरेको सूर्योदय नगरपालिकाका प्रमुख रणबहादुर राईले चियाको मूल्य समाधानका लागि नगरपालिकाले न्यूनतम मूल्य तोकेरै अघि बढाए पनि केही व्यक्तिले त्यसलाई नकारात्मक प्रयोग गरेको बताए । उनले नगरपालिकाले प्रतिकिलो न्यूनतम मूल्य रु ४० तोकेको छ । त्यसलाई नकारात्मक रुपमा प्रचार गरिएको बताउँदै यो मूल्य न्यूनतम हो । गुणस्तर हेरेर चियाको मूल्यमा वृद्धि हुन्छ भने । उनले नेपालको चियालाई विश्व बजारमा पूर्याउनका लागि पनि नगरपालिकाले अभियान नै सुरु गरिएको जानकारी दिए ।
इलाममा तीन हजार ३९३ हेक्टर क्षेत्रफलमा चियाखेती हुँदै आएको छ । झापामा सात हजार १९५ हेक्टरमा चियाको खेती हुने सर्वेक्षणले देखाएको छ । इलामसहित विभिन्न पहाडी जिल्लामा वार्र्षिक ५५ लाख किलो अर्थोडक्स चिया उत्पादन हुने गरेको तथ्याङ्क छ ।
सरकारसँग १३ हजार मेट्रिक टन डीएपी मात्र मौज्दात : के यस पटक पनि मल अभाव होला ?
पानी नपर्दा मकै रोप्न किसानलाई समस्य
कुखुराको मासुको भाउ फेरि ह्वात्तै बढ्यो, किलोको कति पुग्यो ?
लटअनुसार मूल्य तोक्ने गरी भारतबाट मल ल्याउने तयारी
Krishi Bajar is agricultural market place for farmers and all other agriculture stake holders. Farmers can sell/buy/lease their land, crops, natural manures, cattle, used farm machinery etc using this e-Trading Platform.